I-OIL kunye ne-GAS
UMGAQO WAKHO LUQINISEKILEYO
Iqela le-SI yinkampani ethengisa izinto zentengiso yehlabathi kunye neenkampani ezinamava ngaphezulu kweminyaka engama-20. Iqela le-SI linonxibelelwano lomnxeba olugqitha umhlaba wonke ngokubanakho ukubonelela ilizwe okanye inkampani ngayo kanye le nto bayifunayo. Siphatha isikhongozeli kunye nokuhanjiswa kwezinto ezininzi zeSoft Commodities ngohlobo lweRice, iswekile, isoya, iinkozo njlnjl. Iqela le-SI linganceda ukudala iimarike ezingazange zabakhona ngaphambili kumazwe amaninzi ngokunceda oorhulumente bangenise izityalo ezitsha kunye neenkqubo zokuzihlaziya ukuzisa kwintengiso yehlabathi. Zive ukhululekile ukunxibelelana nathi ngesicelo esithile sayo nayiphi na impahla ethambileyo njengoko siza kuba nakho ukuyifumana.
Iimpahla ezinzima ezifana ne-Iron Ore, Amalahle, i-Metal Metal, Copper kunye neoyile ziya vet kwaye ziyafumaneka nangona Iqela le SI. Sinobudlelwane bexesha elide noorhulumente kunye namashishini kwihlabathi liphela esivumela ukubonelela ngezinto zorhwebo lokwenyani ngamaxabiso okhuphiswano. Iqela le-SI vets zonke iinkampani esisebenzayo ukuqinisekisa ukuba zinakho ukugqibezela ngempumelelo ukuthengiselana. Simele abathengi kunye nabathengisi kwaye sinike isisombululo sobabini, ukuba ungumthengisi ojongana nabaphulaphuli behlabathi kunye neqela elomeleleyo lokuthengisa imveliso yakho unxibelelana nathi namhlanje.
Iqela le-SI lingumboneleli weIron Ore, Copper, Coal, Scap Metal, oyile kunye neemveliso zezolimo kwihlabathi liphela.
Xhumana nathi namhlanje info@sigroupco.com kwaye ufumane impendulo kungaphelanga iiyure ezingama-24.
I-logo yeqela le-SI yaphuhliswa kwaye yenziwa eSwitzerland ukufuzisela izinto ezixabisekileyo ezimelwe kubomvu njengelitye elixabisekileyo. Ezi zixhobo zixabisekileyo zifunyenwe kwihlabathi liphela ziphuma Umhlaba ulungisiwe kwaye uhlangulwa emhlabeni jikelele ngenqanawa kulo lonke ulwandle emhlabeni jikelele. Isilivere edibeneyo Ukurhweba kwintengiso ebomvu kumele iinqanawa kunye neendlela zokuhambisa kulwandlekazi lwehlabathi ezintlanu.
Amalungelo okushicilela © 2020 | Iqela le-SI | Onke Amalungelo Agciniwe.